I Love Sharing; because sharing isakind of love., Albany, NY (2022)
I Love Sharing; because sharing isakind of love.
Welcome to our official page.. Public Figure
လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သက်၂၅နှစ်အတွင်းမှာ တစ်ခါမှကတောက်ကဆ မဖြစ်ဖူးဘူးလို့ မြို့မှာ နာမည်ကြီး ပါတယ်။
အဲဒီ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို မေးမြန်းဖော်ထုတ်ဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခု လုပ်လိုက်ပါတယ်။
"ဒီအဖြစ်အပျက်က မယုံနိုင်စရာ အံ့အားသင့်ဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဒီလို အိမ်ထောင်ရေးမျိုးကို ဘယ်လိုများ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသလဲ ခင်ဗျာ?"
ယောက်ျားဖြစ်သူက သူတို့ရဲ့ Honeymoon နေ့ရက်တွေကို ပြန်တွေးရင်း ပြောပါတယ်...
"ကျတော်တို့တွေ Honeymoon မှာ
အဲဒီမှာ မြင်းစီးသွားမယ်ဆိုပြီး မြင်းတစ်ကောင်စီ စီးကြတာပေါ့ဗျာ"
"အဲဒီမှာ ကျတော့်မြင်းက စီးရတာ အဆင်ပြေပေမယ့် ကျတော့်မိန်းမစီးတဲ့ မြင်းကတော့ နည်းနည်းရိုင်းပုံရတယ်ဗျ"
"လမ်းမှာ သွားနေရင်းနဲ့ပဲ အဲဒီမြင်း ရုတ်တရက်ထခုန်လိုက်တာ ကျတော့်မိန်းမ ဒယိမ်းဒယိုင်ဖြစ်ပြီး ပြုတ်ကျပါလေရော"
"ဒါပေမယ့် သူက မြေကြီးပေါ်ကနေ လူးလဲထပြီး မြင်းရဲ့ကျောကုန်းလေးကို အသာလေးပွတ်ပေးရင်းနဲ့ မြင်းကို...
"ဒါ မင်းရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်နော်..." လို့
ပြောပြီးတော့ သူလည်း မြင်းကျောပေါ်ပြန်တက်ပြီး ခရီးဆက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
ခဏအကြာမှာ စောစောကလိုပဲ ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ကျတော့်မိန်းမက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ...
"ဒါ မင်းရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်နော်..." လို့ ပြောပြီး
တတိယအကြိမ်မြောက် မြင်းက ခါချတဲ့အခါမှာတော့ ကျတော့်မိန်းမက ဘာမှမပြောပဲ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ထုတ်ပြီး မြင်းကို အသေပစ်သတ်လိုက်ပါလေရောဗျာ။
"ကျတော်လည်း ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ မင်း ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလည်းကွ။ သနားစရာကောင်းတဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးကို မင်းသတ်ပစ်လိုက်ပြီ။ မင်းရူးနေလား!!!" လို့ အော်လိုက်မိတယ်။
အဲဒီအခါ ကျတော့်မိန်းမက ကျတော့်ကို
ရှင့်ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်နော်..." တဲ့။
ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲ နှစ်ယောက်အတူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေလာခဲ့ကြတာ အခုအချိန်အထိပါပဲဗျာ..."
ကွန်ပျူတာရဲ့ အရေးပါသော Short Cut လေးများ 😚
ctrl +a- အားလုံးကို ရွေးပါ
ctrl + c - ကော်ပီကူးခြင်း
ctrl +d- ဖြည့်ပါ
ctrl +f- ရှာတွေ့သည်
ctrl + g - စာသား ၏ နောက်ထပ် ဖြစ်ရပ်ကို ရှာပါ
ctrl + h - အစားထိုးရန်
ctrl + k - hyperlink ကို ထည့်ပါ
ctrl + n - workbook အသစ်
ctrl + ဖွင့်သည်
ctrl + p - ပုံနှိပ်ခြင်း
ctrl + r - ဘာမှမရှိပေ
ctrl + s - သိမ်းဆည်းသည်
ctrl + u - understand
ctrl + v - ပေ့စ်ပေ့စ်
ctrl w - ပိတ်သည်
ctrl + နှင့် - ထပ်ခါထပ်ခါ
ctrl + z - ပယ်ဖျက်သည်
f1 - ကူညီမှု
f3 - နာမည်ကိုပေ့စ်လုပ်ပါ
f4 - နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကို ထပ်လုပ်ပါ
f4 - formula ကို ဝင်ရင် ၊ လုံးဝ / အမျိုးအလိုက် ဒိုင်လူကြီးတွေ ပြောင်းလိုက်
f6 - နောက်ပန်အီး
f7 - စာလုံးပေါင်းစစ်
f8 - mode ရဲ့ တိုးချဲ့မှု
f9 - workbooks အားလုံးကို တွက်ချက်ပါ
f10 - menubar ကို ဖွင့်ပါ
f11 - စာပိုဒ်အသစ်
f12 - save တာအဖြစ်
ctrl +:-လက်ရှိအချိန်ကို ထည့်ပါ
ctrl +;-လက်ရှိရက်စွဲကို ထည့်ပါ
ctrl + "- အထက်ပါဆဲလ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို မိတ္တူကူးယူပါ
cell အထက်မှ formula ကို ctrl + '- copy
အလုပ်ချိန် - excel မီနူးမှာ နောက်ထပ်functions အတွက် offset ချိန်ညှိမှု
shift + f1 - ဘာတွေလဲ ။
shift + f2 - cell cell ကို တည်းဖြတ်
shift + f3 - formula မှာ လုပ်ဆောင်မှုကို ပေ့စ်လုပ်ပါ
shift + f4 - နောက်ရှာမယ်
shift + f6 - ယခင် panel
shift + f8 - ရွေးချယ်မှုကိုထည့်ပါ
shift + f9 - တက်ကြွသော အလုပ်စာရွက်ကို တွက်ချက်ပါ
shift + f10 - popup မီနူးပြပွဲ
shift + f11 - spreadsheစာရွက်အသစ်
shift + f12 - ကယ်ပါ
ctrl + f3 - နာမည်သတ်မှတ်ပါ
ctrl + f4 - ပိတ်သည်
ctrl + f5-xl, မူရင်းပြတင်းပေါက် ၏ အရွယ်အစား
ctrl + f6 - နောက်ထပ် workbook window
shift + ctrl + f6 - ယခင် workbook window
ctrl + f7-င်းဒိုးကို ရွှေ့ပါ
ctrl + f9 - workbook ကို minimize
ctrl + f10 - maximize သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထားရှိရန် ပြတင်းပေါက်များ
ctrl + f11 - inset 4.0 macro အလွှာ
alt + f1 - စာပိုဒ်တစ်ခု ထည့်ပါ
alt + f2 - ကယ်ပါ
alt + f8 - macro dialogue
alt + f11 - visual basic တည်းဖြတ်သူ
ctrl + shift + f3 - အတန်းနှင့်ကော်လံအညွှန်းများကို အသုံးပြုပြီး နာမည်တစ်ခုဖန်တီးပါ
ctrl + shift + f6 - ယခင် window
ctrl + shift + f12 - ပုံနှိပ်ခြင်း
alt + shift + f1 - spreadsheet အသစ်
alt + shift + f2 - ကယ်ပါ
formula အတွက် ctrl + '- အဖွင့်တန်ဖိုး / ပြပွဲ
ctrl + shift +a- formula မှာရှိတဲ့ အငြင်းပွားစရာ နာမည်တွေကို ထည့်လိုက်
alt + မြားအောက်မြား - အလိုအလျောက်မြင်ကွင်း စာရင်း
alt + '- format စတိုင် ဒိုင်ယာလော့စ်
crd: orginal writer.
ခါးနာခြင်း ဆိုတာဟာ ကျောနောက်ဖက်
ကြွက်သား နာဗ်ကြော အရိုး အရိုးဆက်အကြား ကြားခံအရွတ်
ကျောရိုးဆစ် စသဖြင့် နေရာတစ်ခုခုက
ကျောက်ကပ်ရောင်လျှင်လည်း ခါးနာတတ်ပါတယ်။ပေါ့ပေါ့စစ မနေကြပါနဲ့။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်ရီ အနှစ် နဲ့
ကြက်ဥအကာ ကို သမအောင်ခွက်ထည်း
ထည့်မွှေပါ။ပြီးနောက် နာနေသည့် ကိုက်နေ
ပြီးနောက် အဝတ်သန့်သန့်ကိုခါး၌ ပတ်တီးစည်းသလို တင်းကြပ်စွာစည်းထား
အဝတ်ထူထူ ဖြင့်ထုတ်၍ ဒယ်အိုးပေါ်တွင်
ဒညင်းသီး ဆူးပုပ် ဒံပေါက် မြှစ်အမျိုးမျိုး
မှို အမျိုးမျိုး ဝမ်းတွင်းကလီစာများ
ဝက်သား ငါးသလောက် အင်ဥ
ငါးကြင်းဖြူ ငါးတန် စတဲ့ငါးများ
နွားနို့ ဒိန်ချဉ် ခရမ်းချဉ်သီး
ကြက်သွန်ဖြူ ဆလပ်ရွက် မုန်ညင်းရွက်
ပန်းဂေါ်ဖီ ပန်းသီး လိမ္မောသီး ကျွဲကောသီး
သင်္ဘောသီး ပန်းသစ်တော် ဆီးဖြူသီး
Credit - ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
👉 (၁) နံနက်စာ မစားခြင်း။
👉(၂) ဆား စားသုံးမှု များနေခြင်း။
👉(၅) ဆေးဝါများ အလွန်အကျွံ မှီဝဲနေခြင်း။
👉(၆) လုံလောက်သော အနားယူခြင်း မရှိခြင်း။
👉(၇) တစ်ခါတစ်လေ အလွန်အကျွံ စားခြင်း။
👉(၈) အသားများကို အလွန်အကျွံစားခြင်း။
👉(၁၀) မနက်အိပ်ယာထ ဆီးသွားချင်သည်ကို
ကျောက်ကပ်က သွေးကြောထဲမှာ လှည့်ပတ်နေတဲ့သွေးတွေကို သန့်စင်အောင်စစ်ထုတ်ပေးပြီး အစားအစာတွေကနေဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်တွေကို စုပ်ယူကာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင် ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အမူအကျင့်တွေထဲကနေ ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေး ပျက်စီးစေမယ့် အပြုအမူတွေကို ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်အလုံအလောက်ရရှိမှ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျောက်ကပ်ပေါ့။ ရေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားပေးတဲ့နေရာမှာ အရမ်းအကူအညီဖြစ်တာကြောင့် ကျောက်ကပ်မှာကျောက်မတည်အောင်တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တာထက်အလွန်အကျွံသောက်တာလည်းမကောင်းပါဘူး။ တစ်ရက်မှာ ရေနှစ်လီတာလောက်သောက်ရင်အတော်ပါပဲ။
အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတစ်ယောက်က ဆိုဒီယမ် ၂၃၀၀မီလီဂရမ်လောက်ပဲစားသုံးသင့်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဌာနထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပေမယ့် လူတိုင်းကအဲ့ဒီပမာဏထက်ပိုအောင်စားသောက်နေကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းအစားအစာတွေမှာ ဆိုဒီယမ်ပမာဏများများထည့်ပြီးအရသာပိုရှိအောင်ထုတ်လုပ်တာကို လူတွေကအရမ်းကြိုက်ကြပါတယ်။ဆိုဒီယမ်စားသုံးမှုများတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအငန်ဓာတ်တွေအရမ်းများလာပြီး ကျောက်ကပ်ကသန့်စင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အငန်ဓာတ်များတဲ့အစားအစာတွေကိုလျှော့စားပြီး အသီးအနှံနဲ့အရွက်စိမ်းတွေကိုလည်းသင့်တင့်သလောက်စားပေးပါ။
ကျန်းမာရေးလိုက်စားသည်ဖြစ်စေ၊ မလိုက်စားသည်ဖြစ်စေ သွေးဖိအားတိုင်းတာကိုမကြာခဏလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သွေးဖိအားများတယ်ဆိုတာ နှလုံးသွေးကြောနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြဿနာရှိနေတာဖြစ်ပြီး သွေးတိုးရောဂါဖြစ်လာရင်သွေးလွှတ်ကြောတွေကျဉ်းမြောင်းလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ သွေးထဲမှာ ကိုလက်စထရောနဲ့အဆိပ်အတောက်တွေစုပုံလာပြီး ဒါကို ကျောက်ကပ်ကသန့်စင်နိုင်စွမ်းနည်းလာပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အခါ ကျောက်ကပ်တစ်သျှူးတွေက လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကို ကောင်းကောင်းမစုပ်ယူနိုင်တော့ဘဲ ကျောက်ကပ်မှာထိခိုက်လာပါတယ်။
ဆီးအိတ်က အရည်နှစ်ခွက်စာပမာဏကို သုံးနာရီကနေ၊လေးနာရီအထိထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ သန့်စင်ခန်းမရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ဆီးသွားချင်လာတာကို အချိန်တွေအကြာကြီးအောင့်ထားလိုက်တဲ့အခါ ကျောက်ကပ်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီး မကြာခဏဆီးသွားချင်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင် တင်ပါးဆုံရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
အငန်တွေအရမ်းစားတဲ့အခါ ကျောက်ကပ်ကအဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းနည်းလာသလိုပဲ ၊ အချိုနဲ့သရေစာတွေအလွန်အကျွံစားတာကလည်း အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်စေတာကြောင့် ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
အနီရောင်အသားတွေက သံဓာတ်နဲ့ပရိုတင်းဓာတ်ကို အပြည့်အဝြဖည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အမိုးနီးယားနဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်တွေလည်းပါနေတာကြောင့် နေ့တိုင်းစားရင် ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
ညဘက်မှာကောင်းကောင်းအိပ်မှ နောက်နေ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်က အားအင်ပြည့်၀မှာပါ။ တကယ်လို့ အိပ်ချိန်မလုံလောက်ဘူးဆိုရင် သွေးလှည့်ပတ်မှုမကောင်းတော့ဘဲ၊ သွေးဖိအားများလာမယ်၊ အဲ့ဒါက ကျောက်ကပ်ကိုသွားထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်အိပ်ချိန်အတိုင်းကောင်းကောင်းအိပ်ဖို့လိုပါတယ်။
Be the first to know and let us send you an email when I Love Sharing; because sharing isakind of love. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Sendamessage to I Love Sharing; because sharing isakind of love.:
Very Very True ! Must watch and imagine VIDEO ထဲက စာသားေတြကိုေသခ်ာဖတ္ေပးပါ...
ပုဆိုးေလးနဲ႔ ကိုကို အရမ္းေကာင္းတဲံ့ သီခ်င္းေလးပါ..
ကမၻာမွာ ဘာသာႀကီး ၅-ခု ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပုံုကို ကမၻာ႔တကၠသိုလ္ႀကီးေလးခုကေန သုေတသန ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္.. ၂မိနစ္နဲ႔ ၃၅စကၠန္႔သာရွိတဲ့ ဒီဗြီဒီယိုဖိုင္ေလးကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာရဲ႕ အေျခအေနကို ျမင္ၾကရမွာပါ..
အိမ္မက္ေလးထဲမွာ.. အိပ္မက္ထဲမွာေတာ့ေတြ႔ႏိုင္တယ္ေပါ့.... Crushတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့..တကယ့္Feel ျဖစ္လိမ့္မယ္...။ ဒီထက္ပို Feel ျဖစ္ရင္ ရူးသြားနိင္တယ္..ျဖစ္ဖူးေတာ့..ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္...။
ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ နံနက္ခင္းတြင္ စကၤာပူ ရုပ္သံလုိင္း Channel News Asia မွ ထုတ္လႊင့္ၿပသ သြားခဲ့တဲ့ ေနၿပည္ေတာ္ေရာက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားေနထိုင္လွ်က္ ရွိေသာ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားအေၾကာင္း ... CNA မွ သတင္းေထာက္္မေလး ေမေ၀ါင္ ကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံေမးၿမန္းထားတာပါ.. သူတုိ႔ ဘယ္လုိ ေနထုိင္ၾကတယ္ဆုိတာ ေတြ႔ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ credit - U Aung Min Swe
It's awesome.. Western Australia
A beautiful village.. doesn't it..??? watch.. you'll like it..just5seconds long..
က်ေနာ္တို႔ K'CHO CLAN ညီကိုမ်ား အတုယူသင့္တဲ့ ညီအစ္ကို ေမတၱာေလးပါ..
Other Social Media Agencies in Albany